कटारीमा गोली चल्दा एक जनाको मृत्यु, एक बालक र प्रहरी घाइते ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
कटारीमा गोली चल्दा एक जनाको मृत्यु, एक बालक र प्रहरी घाइते !
उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१० मा रहेको कालिका माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा गोली चल्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार साँझ साँढे पाँच बजेतिर गोली चलेको उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।
साँझ ५:२० मतदानपश्चात मतपेटिका सिल बन्दी गर्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अन्दाजी ५०–६० जना कार्यक्रताहरूले मतपेटिका लुट्ने प्रयास गरेपछि स्थिति तनाव ग्रस्त भएको थियो ।
सो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि उक्त मतदानस्थल सुरक्षाका लागि खटिएको नेपाल प्रहरीको प्रसनिको कमाण्ड चार जना प्रहरी र आठ म्यादी प्रहरीको टोली गरी जम्मा १२ जनाको टोलिले एसएलआर राइफलबाट चार राउन्ड र थ्रिनट थ्री राइफलबाट चार राउण्ड गरी जम्मा ८ राउण्ड गोली फायर भएको थियो ।
गोली लागेर सोही स्थानका १९ वर्षीय नवीन कटुवालको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । यस्तै, सोही स्थान बस्ने शम्भु श्रेष्ठको छोरा १४ वर्षीय मन श्रेष्ठ घरमा बसिरहेको अवस्थामा खुट्टामा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका छन् ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले गरेको ढुङ्गामुडाबाट प्रहरी जवान विष्णु तामाङ्गको टाउकोमा चोट लागेर घाइते भएका छन् ।